मोबाइल पारखीहरु सावधान ! यस्ता छन् मोबाइलका साइड इफेक्ट | Rajmarga
मोबाइल पारखीहरु सावधान ! यस्ता छन् मोबाइलका साइड इफेक्ट
सीधा असर दिमागमा
अनुसन्धानका अनुसार मोबाइल रेडिएसनको सीधा असर स्मरणशक्तिमा पर्न जान्छ । जसले सर्ट टर्म मेमोरी लसको समस्या निम्त्याउने गर्छ । फोनबाट निस्कने सिग्नलले दिमागको यस्तो भागलाई प्रभावित पार्छ, जसको सम्बन्ध मेमोरी र सिकाइसँग हुन्छ ।
यदि बच्चाले मोबाइल या यस्तो प्रकृतिको डिभाइसको बढी प्रयोग गरेमा उसको सिक्ने क्षमतामा कमी आउन थाल्छ ।
अध्ययन टोलीका प्रमुख प्रोफेसर बेङ्ग्ट अर्नेट्सका अनुसार मोबाइलको रेडिएसनले मानिसको निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउने काम गर्छ । यसकै कारण मोबाइल कम्पनीहरू पनि रेडिएसन कम गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।
पिम्पल्स या खटिरा
प्रयोगमा आएका सबै मोबाइल फोनमा अत्यधिक धुलो र फोहोर हुन्छ, जुन ब्याक्टेरिया प्रजननका लागि सुरक्षित ठाउँ बन्छ । त्यसैले प्रत्येक समय मोबाइलमा कुरा गर्दा या आफ्नो कानसम्म मोबाइल लैजाँदा यस्ता फोहोर र ब्याक्टेरिया छालामा सर्ने गर्छ ।
यसले अनुहारमा दाग र कालो धब्बाको समस्या ल्याउने गर्छ । त्यसैले मोबाइलको प्रयोगपछि अनुहार पुछ्दा वा सफा गर्दा राम्रो हुन्छ ।
लामो समयसम्म मोबाइलको स्क्रिनबाट निस्कने प्रकाशको सम्पर्कमा रहँदा छालामा ‘हाइपर पिङमेन्टेसन’ हुनुका साथै बूढोपनको समस्या पनि निम्तिन सक्छ । यसले छालालाई क्षतिग्रस्त बनाउँछ ।
त्यस्तै, यसकै कारण आँखामा रिंकल्सजस्ता समस्या पनि देखिने गर्छ । यस्तो अवस्थाबाट छुटकारा पाउन मोबाइललाई चार्ज गर्दा वा रातमा सुत्दा आफूभन्दा टाढा राख्नुपर्छ ।
Previous post: महिला गर्भवती थिइनन्, प्रतिबन्धका बावजुद १२ वर्षपछि कुनै बच्चा जन्मिएपछि सिंगो द्वीपमै खुसियाली
Next post: हस्तरेखाबाट थाहा पाउनुस् तपाइँको विवाह कहिले र कुन दिशामा हुन्छ?
सावधान ! फोनबाट डिलिट गरिएका सामग्री यसरी हेर्न मिल्छ, अन्तरङ्ग पल दुश्मनको हात पर्ला
मृतकको फेसबुक डाटामा पहिलो हक कस्को ? यस्तो आयो अदालतको फैसला